Ciidamada Somalia iyo kuwa AMISOM oo lagu eedeeyay inay dad Shacab ah ku laayeen G/Galguduud |
Ciidamada Somalia iyo kuwa AMISOM oo lagu eedeeyay inay dad Shacab ah ku laayeen G/Galguduud
Oday-dhaqameed ka tirsan kuwa Gobolka Galgaduud ayaa ciidamada Itoobiya ee AMISOM ka socda iyo kuwa dowladda Somalia ku eedeeyey inay Gobolkaas ku laayeen Macalimiin dhiga dugsiyo Qur’aan iyo dad rayid ah.
Mid ka mid ah waxgaradkan oo lagu magacaabo, Macallin Maxamuud Cali ayaa u sheegay warbaahinta in 16-qof ay ciidamada is-garabsanaya ku dileen Sabtidii la soo dhaafay deegaanno ka tirsan gobolka Galguduud.
“Deegaannada Ceel Qooxle iyo Ceel-la-heley oo ka tirsan degmada Ceel-buur ee gobolka Galguduud waxay ciidamadan ku laayeen 16-qof oo isugu jiray rayid iyo macallimiin dadka bara diinta Islaamka,” ayuu yiri Maxamuud Cali oo aan sheegin sababta rasmiga ah ee loo dilay dadkan.
Sidoo kale, Macallinku wuxuu sheegay in dadkan ay ku jireen labo macalin dugsi oo si aad ah looga yaqaan deegaannadaas, waxaana lagu kala magacaabi jiray buu yiri Sheekh Daahir Xede Maxamed iyo C/llaahi Bood Cabdi.
“Waxaan cabasho u soo jeedinaynaa Dowladda Federaalka iyo AMISOM inay wax ka qabtaan dhibaatada lagu hayo dadka deegaannada Gobolka Galguduud, gaar ahaan middii lagu laayay dad rayid ah,” ayuu Macalin Maxamuud hadalkiisa ku daray.
Ugu dambeyn, illaa hadda ma jiro wax war madax-bannaan oo xaqiijinaya dilka loo geystay dadka rayidka ah oo dhinacyo kale laga helay, iyadoo sidoo kalena aysan weli ka hadlin dhacdadan dowladda federaalka Somalia.